Ukukhupha i-tube yokubamba i-induction, ipayipi, ibha ye-steel annealing
Ikhaya / izicelo / Ukunyuselwa kweNkcazo / Ukwenziwa kwesihlomelo
Udidi: Ukunyuselwa kweNkcazo tags: ku lathisa, induction elenzelwe ubhedu, ityhubhu yobhedu emiselweyo, induction elenziweyo, Inkqubo yokuqinisa, Ubhedu lwecingo luyamisa, ukunyuka kwamaxesha amaninzi, uhlengahlengiso, induction elenza ubhedu, Inkqubo yokwazisa
Iyintoni isilungiso sokungeniswa?
Le nkqubo iyatshisa izitya eziye zafumana ukusetyenziswa okubalulekileyo. Ukunyusa ukunyusa kunciphisa ubunzima, kuphucula ubuqhetseba kwaye kunciphisa uxinzelelo lwangaphakathi. Ukuqhawula umzimba ngokugcwele yinkqubo apho ulungelelwano lomsebenzi olupheleleyo luhlonyelwe khona. Nge-anneal seam (eyaziwa ngokuchanekileyo njenge-seam normalizing), kuphela indawo echaphazela ukushisa eveliswe yinkqubo yokulumala.
induction elenz 'ithutyana
Ukufakelwa kwe-Induction nokuqhelanisa unikela ukushisa okukhawulezayo, okunokwethenjelwa kunye nokwendawo, ukulawula okushisa okuchanekileyo, kunye nokuhlanganiswa okulula kumgca. Ukukhwabanisa kuthatha umsebenzi owenziweyo ukuchaza ngokucacileyo, kunye neenkqubo zokulawula ngokuqhubekayo nokujonga kunye nokurekhoda yonke inkqubo.
Ukufakelwa kwe-Induction kunye ne-normalizing isetyenziswa ngokubanzi kwi-tube kunye ne-pipe industry. Kwakhona kufaka i-wire, i-steel strips, ii-blade kunye ne-tubing tubing. Enyanisweni, ukuchongwa kukulungele ukuba kukho nawuphi na umsebenzi wokulungisa.
Ziziphi izixhobo ezikhoyo?
Efanelekileyo izixhobo zokunyuselwa kuquka i-DW-MF, iDW-HF kunye ne-DW-UHF yokucoca.
Ukukhupha i-Annealing Saw Blades
Ukukhutshwa kwefowuni yokuHlulela ukuPhakamisa